Official Website of CA Member Rabindra Adhikari – सहमति भन्दैमा सगरमाथामा मोटर लैजान सकिन्छ र?
एमाले युवा नेता तथा निवर्तमान सभासद् रवीन्द्र अधिकारी विद्यार्थी राजनीतिमा छँदा नै चर्चामा थिए। तत्कालीन शाहज्यादा पारस शाहले चलाएको गाडीले लोकगायक प्रवीण गुरुङलाई किचेर मारेपछि उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने, दरबारका सदस्यमाथि संसद र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउनुपर्नेलगायत् मागमात्रै राखेनन्, यिनै मागसहित ५ लाख ९१ हजार जनताको हस्ताक्षर दरबारलाई बुझाए पनि। जुन घटना चर्चित रह्यो।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका युवा नेतामध्ये एक अधिकारी अहिले भने गृह जिल्ला कास्कीको सदरमुकाम पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागिपरेका छन्। विद्रोही नेताको छवि बनाएका अधिकारी संविधान सभामा खेलेको भूमिकाका लागि प्रशंसित सभासद्मध्ये एक हुन्। संविधान सभा पुनर्स्थापनाका पक्षधर अधिकारीले संविधान सभाकै अर्को चुनावमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। अधिकारीसँग यही सेरोफेरोमा रहेर नागरिकका बसन्त बस्नेत र स्वरूप आचार्यले गरेको कुराकानी :
संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने भन्दैछन्। तपाईंलाई मनमनै खुसी लागिराख्या होला, होइन?
हामी संविधान सभाको निसर्त पुनर्स्थापनाको पक्षमा कहिले पनि रहेनौं। हामी पुनर्स्थापनाको नारा लिएर गएका पनि होइनौं। तर मुख्य प्रश्न बाँकी छ- १२ बुँदे सहमतिदेखि आजसम्मको यात्रालाई सफल बनाउने हो कि होइन? राजतन्त्र त ढल्यो, गणतन्त्रको यो यात्रा सफल पार्ने हो कि होइन? समावेशी लोकतन्त्रका यी उपलब्धि जोगाउने हो कि होइन? संविधान सभाले यति धेरै काम गरेको छ, यिनलाई यत्तिकै छाडिदिने हो भने उपलब्धि संस्थागत हुन सक्दैनन्। थोरै काम बाँकी होलान्, हामीले धेरै काम गरेका छौं। तिनलाई टुंग्याएमा मात्रै १२ बुँदेको यात्रा पूरा हुन्छ। नत्र संविधान सभामात्रै असफल ठहरिने होइन, यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि असफल हुने हो। नेतृत्वकर्ता र दलहरु पनि असफल हुन्छन्। यताचाहिँ हेर्ने कि नहेर्ने? त्यसैले संविधान सभालाई यी सबै उपलब्धि जोगाउने मञ्चका रूपमा प्रयोग गरौं।
यो तथ्य नै हो। हामीलाई युवा साथीहरु भन्नुहुन्छ- …बाराक ओबामा आए, डेबिड क्यामरुन आए ४२/४५ वर्षमा। तपाईंहरु खै नेतृत्वमा गएको?’ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेतृत्व स्थापित हुने अमेरिकी मोडेल र हाम्रो मोडेल फरक छ। अमेरिकामा …मासबेस्ड पार्टी’ हुन्छन्। हाम्रा पार्टी कार्यकर्ता आधारित छन्। यहाँ तल्लो स्तरदेखि नै संगठनका तह छन्। ब्युरोक्रेसी र त्यसले बनाएको एउटा संस्कृति यहाँ छ। त्यसमाथि युवा भनेको अहिलेसम्म स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको पुस्ता हो। अहिलेसम्म सिर्जनामा यो पुस्ता गइसकेको छैन। त्यसो भएको भए छिटोछिटो हस्तान्तरण हुन्थ्यो।
एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि खुबै लोकतान्त्रिक पार्टी बनायौं भनी दाबी गर्नुभएको थियो। खै त, पार्टीमै लोकतन्त्र आएको रहनेछ!
विद्यार्थीकाल सम्झाउनुभो, तत्कालीन शाहज्यादा पारस शाहले लोकगायक प्रवीण गुरुङलाई गाडीले किचेर मारेपछि राजदरबारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध अखिलको तर्फबाट पाँच लाख हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो। त्यतिबेला तपाईंलाई नेपालबाट राजतन्त्र कुनै दिन अन्त्य हुनसक्छ भन्ने लागेको थियो?
नेपालमा गणतन्त्र आउँछ, राजतन्त्र बिदा हुन्छ भन्ने केही विश्व इतिहास पढेको आधारमा अनुमान गरिसकेको थिएँ। विदेशमा राजतन्त्रका चरित्र र जनताको चेतनास्तर आदि सबै हेरेपछि राजतन्त्र नेपालबाट पनि हट्न सक्छ भन्ने स्कुल पढ्दादेखि नै अलिअलि लाग्न थालेको हो। प्रवीण गुरुङको हत्यामा शाहज्यादा पारस मुछिएपछि दुर्भाग्य के भो भने – दरबारको सदस्यले मान्छे मार्छ, गोली चलाउँछ, तर कोही बोल्न सक्दैन। संवैधानिक राजतन्त्रले बन्दुक बोक्न सक्छ? हामीले गरेको प्रश्न यो हो। यदि मान्छे मार्छ भने त्यो राजतन्त्र संवैधानिक होइन। त्यसकारण यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ- हाम्रो आन्दोलन त्यो थियो। जसको बारेमा फौजदारी अदालत र संसदमा छलफल गर्न पाइन्न, उही अपराध रोक्ने होइन, थप्दै जान्छ, त्यस्तो राजतन्त्र कसरी संवैधानिक हुन्छ? हामीले प्रश्न गर्दा पनि मानिसहरु …दरबारविरुद्ध बोल्ने?’ भनी जिब्रो टोकिरहेका थिए। तर हामीले बहस चलाउन थालेपछि ठूलो समर्थन पायौं। गणतन्त्र त त्यसबेला सपना थियो तर राजाको बारेमा बहसचाहिँ सुरु भयो।
गर्‍यो। तर हामीले उल्टै नेताहरुलाई प्रश्न गर्‍यौं- …हामीले संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा बाहिर के गर्‍या छौं?’ मेसिनगन बोकेर जनता मार्दै हिँड्ने राजतन्त्र हो कि होइन भनी प्रश्न गरेको हो हामीले। दबाब त दरबार हत्याकाण्डपछि अब गणतन्त्रमा जानुपर्छ, राजतन्त्रको औचित्य सकियो भन्दै गर्दा पनि थियो।
संविधान सभा अवसान हुनेबित्तिकै फेरि संविधान सभा चुनावमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्नु भा’थ्यो। हतारमा निर्णय गरिएछ भन्ने पछुतो लागेको छैन?
छैन। बाह्रबुँदे समझदारीदेखि आजसम्मको यात्रामा संविधान सभाले धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ। लोककल्याणकारी, समाजवादी, समावेशी चरित्रको संविधान बनाउन धेरै प्रयत्न र काम भए। नयाँ परिवर्तनका मुद्दा उठाउने र संस्थागत गर्ने काम भएको छ। त्यसलाई बीचमा छाडेर यो परिवर्तन संस्थागत गर्न सकिन्न भन्ने मेरो विश्वास हो। परिवर्तनका उपलब्धि जोगाउने यही संविधान सभाले हो। ती परिवर्तन संस्थागत नगरी जाने चुनावमा मेरो समर्थन छैन।
जुन विवादका कारण संविधान सभाले मृत्युवरण नै गर्नुपर्‍यो, ती विवाद फेरि बल्झाउने?
बल्झाउने होइन, समाधान गर्ने। समाधान गर्न सकिन्न भने तिनलाई लिएर जनमत संग्रहमा जाऔं। समाधान भएका मुद्दाचाहिँ टुंग्याएर जाऔं।
यति कुरा त संविधान सभा सुरुवात्का दुई वर्षपछि गरेको भए पनि भइहाल्थ्यो नि?
अस्ति अन्तिम अवस्थामा पनि कोसिस गरेका थियौं।तर, जेठ २ गते जुन सम्झौता भयो, त्यसबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पछि हटे। मधेसी मोर्चा पनि पछि हट्यो। माओवादी पछि हटेपछि अरु पनि पछि हट्ने स्थिति पैदा भयो। नत्र जेठ २ गते भएको सहमतिकै आधारमा अगाडि जाने हो भने आज पनि सहमति सम्भव छ।
माओवादीले मात्रै धोका दिएको? तपाईंहरुले चाहिँ धोका दिएको होइन?
माओवादीले नै धोका दिएको हो। तर माओवादीले धोका दिने नाममा उल्टै धोका खायो। जुन पार्टी संविधान सभालाई मैले जन्माएँ हुर्काएँ भन्छ, त्यही पार्टी सत्ता स्वार्थका लागि संविधान सभा सिध्याउन तयार हुन्छ भने धोका खाएको नभएर के हो?
माओवादीले धोका खाएकोमा किन चिन्ता तपाईंलाई?
चिन्ताको कुरा होइन। माओवादीले अरुलाई धोका दिइरहेको ठानेको छ भने सबैभन्दा ठूलो धोका उसैले खाएको छ। तर उसले मात्रै खाएको होइन, मुलुकले पनि खाएको छ। हामीले पनि खाएका छौं।
कम्युनिस्टहरु सत्ता बचाउन जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भनेको हो रहेछ, होइन?
तर एमालेले त्यसो गरेन। त्यसो गर्थ्यो भने माधवकुमार नेपालले संविधान सभाको अवधि नसकिई राजीनामा दिनुहुन्नथ्यो नि त। आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि नेता नेपाल र झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुभएको छ- संविधान सभा बचाउने सर्तमा। तर बाबुरामजीले संविधान सभा बचाउन कुर्सी छाड्न सक्नुभएन नि त! प्रचण्डजीले पनि त्यो त्याग गर्न तयार हुनुभएन नि त! कम्युनिस्टको व्याख्या अर्कै धु्रवमा बसेर गर्न सकिएला तर नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। आफूलाई मात्रै होइन, समाजको लोकतन्त्रीकरणमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। जनमतमा विश्वास गर्छ। जनताबाट अनुमोदित हुने, पुरस्कृत हुने र दण्डित हुने कुरामा विश्वास गर्छ।
जनतामाझ जान नमिल्नेगरी मैले कुनै काम गरेको छैन। हामीले धेरै काम गर्‍यौं, शीर्ष नेतृत्वमा समझदारी नभएकाले संविधान जारी हुन सकेन। त्यो अलग्गै कुरा हो। तर मेरा मतदाता आज पनि भन्छन्- मेलो पूरा नभए पनि हामीले पक्का खेताला पठाएका थियौं। साँच्चिकै। आज पनि म जनताकहाँ उत्तिकै अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु, जति पहिले गर्थें। बीचबीचमा म गइरहें। संविधान सभामा के काम भइरहेको छ भन्न पनि गएँ। कति गर्न बाँकी छ भन्न पनि गएँ। अब के गर्नुपर्नेछ भन्न पनि गएँ। किन गर्न सकिएन भन्न पनि गएँ। म सधैं जनतासँग छु। तपाईंहरुलाई लाग्ला- …चुनाव लड्दिनँ भन्छ, फेरि चुनाव लड्ने तयारी गरेझैं गर्छ।’ जनताकहाँ निरन्तर जानु मेरो कर्तव्य हो।
युवा सभासद्हरु त्यतिका संख्यामा हुनुहुन्थ्यो, रबरस्ट्याम्पमात्रै हुनु भो?
पार्टीको नेतृत्व ६० वर्षमाथिको थियो। नेतृत्व नै अन्ततः निर्णायक हुन्छ। बदल्ने भनेको कि त्यसलाई बदल्नुपर्‍यो, कि संसदमा प्रवेश गर्दा बदल्न सक्नुपर्‍यो। हामीले दोस्रो काम गर्न खोजिरह्यौं। हामी निर्णायक थिएनौं। संविधान सभासम्बन्धी जति पनि महत्वपूर्ण अवधारणा छन्, ती तयार गर्ने कुरामा नेतृत्वको सहभागिता छैन भने पनि हुन्छ। उहाँहरुले त के गर्नु भो? खाली दुई चार दिन गएर हाजिर गर्नुभएको मात्रै हो। तपाईं हेर्नुस्, संसारकै योग्यतम् दस्तावेज हामीले निर्माण गरेका छौं। संविधान बनेन, त्यसमा दुःख छ। तर हामीले जति काम गर्न सक्यौं, त्यसमा गर्व छ।
तपाइंको पार्टीले बाबुरामको सरकार हटाउन र सुशील कोइराला वा कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आन्दोलन घोषणा गर्‍यो भने सडकमा जानुहुन्छ कि हुन्न?
त्यस्तो आन्दोलन आयोजना हुन सम्भवै छैन । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र संविधान बनाउने स्पष्ट योजनाविना अब गरिने कुनै पनि प्रयत्नमा जनता सहभागी हुँदैनन्।
अर्का प्रसंग, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन कस्सिएर लाग्नुभएको छ, किन चाहियो पोखरामा नै?
घुम्ने मेच माथि रबिन्द्र अधिकारी, अन्तरबार्ता नागरिक दैनिकमा २०६९-०५-२२ प्रकाशित छ |
Tuesday, June 4th, 2013 | Categories: Interviews